fahamarinana sady tsy hisian’ ny hoe mpitantana no entina fa mitovy” hoy i Lucien Rakotomaharavo, kandidà ben`ny tanàna ao Fandriana. Amin`ny zavatra tena ilain`ny Malagasy amin`izao ny fahantrana misy.Manana ny vinam-pampandrosoana mazava ny TIA TANINDRAZANA, izay mifototra amin’ny fanabeazana. Matoa aho hody any amin`ny tanindrazako any Fandriana kanefa monina eto an-drenivohitra dia hita fa misy elanelany ny vahoaka Malagasy, hoy izy. Aty an-drenivohitra mahatakatra lavitra kokoa noho ny any ambanivohitra ka izany no naniraka ahy hiverina any. Hataony ho laharam-pahamehana, araka izany, ny fanabeazana ho an`ny rehetra na “education pour tous ». Hanabe olona fotsiny satria raha tsy mahay ny olona tsy afaka handroso ny firenena. Rehefa mitovy ny tadindokanga amin`izay lalana aleha dia hisy ny fandrosoana. Tarigetra tsy maintsy atao io fanabeazana io, hoy i Lucien Rakotomaharavo. Notsipihany hatrany fa rehefa tsy misy ny elanelany amin`ny lafiny rehetra, ohatra eo amin`ny fitantanana olona toy ny hoe fampitahorana ny olona entina dia izany no mahamafy ny antoko sady manaraka rindran-damina politika.